Galaxy A9 Star iyo Galaxy S9 Star Lite: Tilmaamaha, qiimaha bilawga | Androidsis
Toddobaadyo dheecaan ah kadib, waqtigii ayaa la gaadhay. Sababtoo ah Samsung ayaa horey si rasmi ah u soo bandhigtay Galaxy A9 Star iyo A9 Star Lite, Taleefannadooda cusubi waxay u dhexeeyaan heerka dhexe. Aaladaha ayaa horeyba dhowr jeer usii dusay toddobaadyadan. Laakiin ugu dambeyntii waxaan awoodnay inaan kula kulanno si rasmi ah munaasabad caan ku ah Shiinaha.
Sidoo kale, Waxay u muuqataa in xilligan Shiinaha uu noqon doono suuqa ay ku bilaaban doonaan Galaxy A9 Star iyo A9 Star Lite. Waxba lagama oga weli wax ku saabsan bilowga suurtagalnimada ee ka baxsan xudduudaha dalka. Laakiin, waxaan diiradda saareynaa marka hore qeexitaankiisa.
Taleefoonnadu waxay doortaan naqshad si caddaalad ah u socota, oo leh shaashado leh wareegyo dhuuban Intaa waxaa dheer, Bixby wuxuu gaaraa labada taleefan. Go'aankan Samsung wuxuu muujinayaa rabitaanka sumadda si kor loogu qaado kaaliyeheeda. Intaa waxaa dheer, waa markii ugu horreysay ee ay ka soo baxdo aagga sare.
1 Tilmaamaha Galaxy A9 Star
2 Tilmaamaha Galaxy A9 Star Lite
Tilmaamaha Galaxy A9 Star
Waa nooca ugu awoodda badan labada shirkadood ee shirkadda Kuuriya soo bandhigtay. Waa nooc xarrago leh, oo qeexitaanno wanaagsan leh, naqshadooduna u muuqato mid dhiirrigelisay Galaxy S9. In kasta oo, dabcan, qeexitaannadu aad ugu badan yihiin qaabkan. Laakiin iyagu waa ikhtiyaar wanaagsan oo loogu talagalay isticmaaleyaasha raadinaya meel dhexdhexaad ah:
Shaashadda: 6,3 inji Super AMOLED oo leh xalka 2220 x 1080 pixels iyo saamiga 18,5: 9
Processor: 8-xudun 2,2 GHz
Kaydinta gudaha: 64 GB (Kordhinta microSD ilaa 400 GB)
Cámara trasera: 16 + 24 Xildhibaan leh fur f / 1.7 aperture.
Kaamirada hore: 24 Xildhibaan leh fur f / 2.0.
Nidaamka hawlgalka: Android 8.1 Oreo oo leh Khibrad Samsung ah
Kale: Bluetooth 5.0, Bixby, NFC, USB Nooca C, akhristaha faraha gadaal, 3.5 mm jack, Wi-Fi, GPS, GLONASS
Qiyaasaha: 77.0 x 162.4 x 7.6 mm.
Peso: 191 garaam
Guud ahaan waxaan arki karnaa inay tahay meel dhexaad wanaagsan, oo si aad ah ugu fiicnaan doonta isticmaaleyaasha doonaya taleefanka noocyadan. Waa in la sheegaa in kaamirooyinka Galaxy A9 Star ay balan qaadayaan inay si aad u wanaagsan u shaqeyn doonaan, waana hubaal inay ku fiicnaan doonaan sawirro fiican. Labada gadaalba, oo ah kamarad laba-geesood ah oo heer sare ah, iyo hore. Shaqo wanaagsan oo ka socota shirkadda arrintan la xiriirta.
Waxay kaloo leedahay baytari wanaagsan, taas oo shaki la'aan siin doonta aaladda madax-bannaanida ku filan oo awood u leh inay ku shaqeyso maalin kasta iyada oo aan wax dhibaato ah jirin. Dareeraha faraha ayaa ku yaal xaga dambe, sida caadada u ah taleefannada soo saaraha Kuuriya. In yar oo lama filaan ah ayaa arrintan la xidhiidha.
Tilmaamaha Galaxy A9 Star Lite
Magaciisa ayaa noo caddeeya, waa moodel yar, marka loo barbar dhigo tii hore. Intaa waxaa sii dheer, qeexitaannadiisa xoogaa way ka mug yar yihiin, laakiin wali waxay ku dhex jirtaa inta u dhexeysa. Marka waxaa la filayaa inay xoogaa ka raqiisan tahay qaabkii hore. Kuwaani waa adiga qeexitaan buuxa:
Shaashadda: 6 inji Super AMOLED oo leh xalka 2220 x 1080 pixels iyo saamiga 18,5: 9
Kaydinta gudaha: 64 GB (La ballaarin karo ilaa 256 GB oo leh microSD)
Cámara trasera: Labo laab + 16 + 5 Xildhibaan leh apertures f / 1.7 iyo f / 1.9
Kaamirada hore: 24 Mpx oo leh fur f / 1.9
Nidaamka hawlgalka: Android 8.1 Oreo
Kuwa kale: Bluetooth 5.0, Bixby, USB Nooca C, Jack 3.5 mm, GPS, NFC, GLONASS, WiFi
Cabirrada: 160.2 x 75.7 x 7.9 mm.
Moodelkan waxaan sidoo kale ka helnaa kamarad gadaal laba-laab ah, in kasta oo xoogaa ka xishoonaya kiiskan. Laakiin kamaradda hore sidoo kale wax badan ayey taagan tahay. Tani maahan wax iska yimid, laakiin waxaa lagu sameeyay iyada oo maskaxda lagu hayo suuqa Shiinaha, halkaas oo kamaradaha sawir-qaadaha ah ay muhiimad weyn u leeyihiin macaamiisha. Samsung waxay rajeyneysaa inay ku qanciso dadka isticmaala sidan.
Haddii kale, tan Galaxy A9 Star Lite waa nooc ka fudud midkii hore, laakiin taasi kama tagi doonto dareen xun marka la eego muraayadaha. Waxqabad wanaagsan ayaa sidoo kale la filayaa.
Waqtigan xaadirka ah waxay umuuqataa in labadan moodal lagu bilaabayo kaliya Shiinaha. Marka uma muuqato inay u badan tahay inaan ka iibsan karno Yurub, in kasta oo ay jirto suurtagalnimada in summaddu dib ugu warshadeynayso moodooyinka kale. Laakiin waa inaan sugnaa.
Qiimaha, Samsung Galaxy A9 Star waxaa lagu qiimeeyaa 2.999 yuan, taas oo ku saabsan 396 euro in la beddelo. Inkasta oo qaabka yar uu ka raqiisan yahay, isagoo kiiskiisa ku kacaya 1.999 yuan, oo qiyaastii ah 265 euro in la beddelo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Galaxy A9 Star iyo Galaxy S9 Star Lite: Samsung dhex dhexaadkiisa cusub
Midowga Yurub wuxuu qorsheynayaa in Google ay ku ganaaxaan kaligood lahaanshaha Android
BlackBerry KEY2 waa halkaan, qaab isku mid ah iyo qeexitaan casriyeysan